Si xun wax u sheeg Saaxir ka daran!!
Somaliya waxaa ka jira Adeeg Warbaahin, kuwaas oo markaad u fiirsato Qaabkooda war tabineed aad dareemaysid in hal meel laga Maamulo iyo in ay sheegida Beenta shahaado gaar ah ku soo qaateen, waa gaar ahaan haddii Beentaa Puntland laga sheegayo e .
Inkasta oo ay Mararka qaarkood Quraan iyo Diin ka hadlaan haddana Guud ahaan iyo Qaabka ay Beenta Puntland uga falkinayaan waxaad moodaa in ay Qiil u heleen Beenta laga qoro ama Beenta la soo tabiyo Puntland.
Kuma eka waxaa Diinta iyo Akhlaada khilaafan ee ay Warbaahintaasi caadaysteen in ay ka falkiyaan Puntland ee isku dir iyo toosinta Fidnada huruda ayey ku dabaalo dufleeyaan oo aad moodaa in aan la isu qorayn.
Waxay isu ekaysiiyaan in ay ka soo horjeedan Dagaalka sokeeye ee Somaliya ka socda waxayse wax ka beereen ka Puntland ka socda oo ay waliba sii badhi gantaaleen markii uu biqlo Dagaalkii ay beereen.
Been ka sheega iyo Balo ka dhex Abuurka Puntland kama shageeyaan Qalabka warbaahin ee qaybta ka noqday Dagaalka sokeeye oo kaliya ee waxaa iyaguna u tafaxaytay Been ka sheega iyo Balo ka Abuurka puntland hay´ado Caalami ah oo Somaliya ka howl gala sida UNka Xafiiskooda Nayroobi iyo warbaahin Caalami ah sida BBCda Laanta Somaliga iyo waliba IRIN kuwaas oo guud ahaan la dihikaro waxay gabi ahaan ka mid yihiin hantida Guud ee Beel Beelaha Somaliyeed ka mid bililiqada ku haysato.
Waxaan iyaguna ka qayb qaadashada been ka sheega iyo balo ka Abuurka puntland ka qadin Ururada iskood isu madacaabay ee Xuquuq aadani duudsiga ah iyo kuwa isku bahaystay dalada Isha Nacaybka iyo Xasard Aloosida ee loo soo gaabiyo (INXA) , kuwaas isu daladaystay Xasar Abuurka iyo Balo ka kicinta puntland waxaana nasiib daro ah in Qaarkood Puntland ka howl galaaan.
Markii loo dhabo galo Asbaabaha ku kalifay in intaas oo joornaal Raayayow iyo homepage iyo hay´adood amaba ururu oo ay ku jiraan kuwo heer caalami ah sida BBCda laanta afsomaliga iyo IRIN ay isu bahaystaan been ka sheega iyo xiisad ka abuurka Puntland waxaa lagu soo koobikaraa in ay labo arimood taga.
1- in uu jiro Nacayb aan bogsood la hayn oo ku salaysan dagaalka sokeeye waxaana malaha jirida Nacaybkaas rib ka sii dhigaya markii loo dhabo galo in 80% ten adeegaasi ay hal beeli bililiqo ku haysato.
2- Iyo in ay 20% tenka soo haray yihiin Dameeri dhaan raacday oo aanay aqoon waxa ay rabaan, la hayna Qadiyad ay u dagaalamaan waxaana Malahaa sii nudaya iyaga oo ay qaar Magac Puntland wataan waa haddii aanay magaca iska qaadane laakiin aanay qadiyad puntland u wadan.
Walibana markii la fiiriyo qaabka ay Moorgan wax uga sheegayaan waxaa la dhihikaraa waa dhidar dhogor idaad xiran waa Isbahaysiga Dooxada Jubo oo magac Puntland guntan.
Hadaba dhibkasta oo ku jira in aad maalinkasta war Been ah oo aan jirin oo la soo maleegay akhrisid ama aad maqashid, haddana arintu waa Beentaada hore runtaada danbay u darantahay oo maanta ma diiriso umana jixin jixaan reer Puntland Been la soo maleegey.
waxaana la dhihikaraa Waxay Qorayaaha iyo Tabiyaasha Beentaasi iloobeen in ay Beentu ilaa iyo inta Rubtu imaanayso oo kaliya suuq leedahay iyo in hal homepage oo runta sheega fasaqayo boqol Beenod, sidaana hadda iyaga iyo waxa ay soo tabinayaanba sicir barar ugu dhacay, arintuna tahay Been la qabaa xiiso mal eh.
Waxaase laga yaabaa illayn si Xun wax usheeg Saaxir waa ka daran yahay in ay sidaas Dad ma hubsadayaal ah ku kasbadaan, kuwaas oo illayn ma hubsade iyo beenaale waa walaale eh iyagoo Beentaas ku duulayaan Dab ku shidaan, dabkaasi waa la daminkara ilayn Been Cimrigeed casar ma gaaree.
Guud ahaan markii si qodo dheer loogu dhabo galo lana fiiriyo sida ay reer Puntland Beenta la soo falkiyey dhag jalaq ugu siinayn waxaa la dhihi karaa war reer puntland Beenta way ka talalan yihiin oo difaac bay ka samaysteene ha isdaalinina.
Maxamud sh xasan dahir
Xasuusin:Qoraaladu waxay ka turjumayaan aragtida Qoraaga mana loo fasiran karo tan Mudugonline.